Guta ReVictoria Falls Rogadzirira Musangano Mukuru WeAfrica Travel Assocation Congress
Chivabvu 17, 2012
Meya weguta reVictoria Falls, va Nkosilathi Jiyane, vanoti guta ravo rakagadzirira zvakakwana kutambira vashanyi vachange vari pamusangano mukuru wechimakumi matatu nemanomwe, we Africa Travel Association muguta ravo.
VaJiyane vanoti mapurisa achange achiita basa rawo nemazvo kuitira kuti achengetedze vashanyi. Chirongwa ichi chichasiya chasimudzirawo hupfumi hwenzvimbo iyi, sezvo vashanyi vachange vachishandisa mari dzavo kutenga zvinhu muguta iri.
Musangano uyu uri kupindwa nevanhu vanodarika mazana mana vanobva munyika dzakasiyana siyana.
Musangano uyu uritanga mangwana kusvika Chipiri. Vashanyi ava vachange vachizeya nezvekusimbaradza mabhizinesi ekushanyira nyika dziri muAfrica, zvikuru kukwezva vashanyi veku America.
Musangano uyu uri kutarisirwa kupa Zimbabwe mukana wekuti igadzirise zvinhu pamberi pemusangano mukuru we United Nations World Tourism Organisation - 2013 General Assembly, uyo uchaitirwa ku Victoria Falls ne Livingstone Zambia gore rinouya.
Sangano re ATA rinoita misangano yaro yepagore muAfrica gore rega.
Mukuru wesangano reZimbabwe Tourism Authority, iro riri kushanda neATA mukuronga musangano uyu, Va Karikoga Kaseke, vanoti vari kufara zvikuru negadziriro yavaita uye kufarirwa kuri kuitwa musangano weATA.
VaKaseke vanoti musangano wekuVictoria Falls uchange uine makurukota gumi nematanhatu anobva munyika dzemu Africa dzinosanganisira Senegal, Gambia, Zambia, Ghana, Central Africa Republic, Cameroon, Ethiopia, Seychelles, Chad, Kenya, Zambabwe ne Namibia.
Hurukuro naVaNkosilathi Jiyane
Hurukuro naVa Karikoga Kaseke